FTTH fibre optic alalan'ny terminal boaty FODB-8a dia mandroso ampiasaina ao FTTH vahaolana ny fifandraisan-davitra mba hamarana na hizara ny feeder tariby ny fibre Optical tady, tady Patch, pigtail tady araka ny fahafahan'ny ny fibre famaranana boaty. Mba hampifandray ny mpampiasa kilaometatra farany. FODB-8a Azo ampiharina eo amin'ny trano, FTTH efi-tranonareo, dia bao, rindrina.
1. Very famolavolana ny splice tsy manam-paharoa sy ny Accessories lovia mamela fifandraisan-davitra ity famaranana ho tsara boaty ho an'ny plc splitters, SC fibre adapters, ary 12 splice fiarovana tanany. Rehetra voalaza Optical tambajotra Accessories azo raikitra ao anatin'ny boaty ny FTTH.
2. Stainless vy fifandraisana ny fibre boaty hamela fixating feeder tariby samy hafa ny habeny, tsy misy slippage.
3. plastika hangers ny fifandraisan-davitra boaty hamela fixating-pihinanam-kofehy amin'ny nylon fifandraisana.
4. Fibre optic boaty manana fitaterana telo inputs, izay tsy mitaky ny hanapaka na hamarana ny Optical tariby alohan'ny fametrahana.
5. FTTH famaranana boaty, FODB-8a manana seranana 12 izay manome ny fametrahana avy amin'ny olona folo fibre optic indray mitete tady.
6. FTTH fizarana boaty natao ny ABS, PVC, izay miantoka lena, vovoka, porofo sy ny fampiasana an-trano ivelan'ny trano na.
7. Wall-tsoavaly fametrahana karazana atao amin'ny 4 nandrisika screws ny 18 * 4 habeny.
8. HTTB manana 2 tovon for Stainless vy fampiasana tarika.
9. Optical famaranana boaty mirakitra ny fixation fononteny mahitsizoro ho an'ny tariby tariby.
10. Tsy misy tany fitaovana. Anti-vandal, ny hidin-trano sy ny fitaovana manan-danja.
Fahan'ny / Output
8 + 2 L
In - 3 amin'ny Max dia 17 mm,
Out - 8 amin'ny Max dia 3 MG sy 1 Max dia 10 MG
Fibre famaranana ny habeny dia 210x195x55 boaty, izay ampy ho an'ny malalaka fibre mety hiondrika rayon. Fahazavana sy ankasitrahana eo fahitana, efajoro manana hery fiarovana sy ny milina mora fikojakojana. Manome mora miditra mpampiasa na ny fidirana tahirin-kevitra miorina amin'ny FTTH.
Jera manome vokatra vita indrindra isan-karazany ny matoantenin'ny atao fitaovana tambajotra Optical, fa fanorenana ny FTTX vahaolana. Accessories toy izany toy ny: Optic Pigtails, Splice fiarovana tanany, Fibre adaptatera, Fibre Optic Tady, Fibre Optic Mikatona, FTTH Drop clamps, hitarika clamps, miaramila iray toko sy buckles, fihenjanana clamps , sns
Ny namahana Optical fibre tariby torohevitra amin'ny Optical fibre boaty avy ambany. Feeder savaivony dia tsy tokony hihoatra ny 17 mm. Avy eo, indray mitete maitso tariby na Patch tady sy pigtails telegrama mifandray amin'ny feeder tariby ny SC fibre Optical adapters, na splice fiarovana tanany sy ny fitantanana avy Optical fampijanonana boaty ho an'ny mavitrika na iray hafa Network Unit Optical.
Eto dia mety ny zava-drehetra ve Ianao Te ho fantatra momba Fibre ny hazavana mba hanana fahalalana bebe kokoa.
Previous: Clevis mety ho insulator CLF-16
Manaraka: 19 'fibre optic fitoeran'entana tendrombohitra fizarana rafitra (ODF) 1U-12-SC
tariby distribution boaty
Fibre Optic Distribution Box 8 Cores
fibre famaranana boaty
fibre ho an'ny an-trano
fibre optic fizarana-boaty 8 fototra
FTTH famaranana boaty
Optical Unit Network
Optical fampijanonana boaty
Optical famaranana boaty
fifandraisan-davitra famaranana boaty
alalan'ny terminal boaty
FTTH mitete tariby tamin'ny tariby sy vy FRP hazo, 1 ...
Fibre Optic Distribution Box, 16 Cores, FODB-16 ...
1 × 2 plc Fibre Splitter, Mini Module, 0,9 M ...
FTTH mitete câble, nanamafy ny vy hazo, 1 Fibre
1 × 4 plc Fibre Splitter, Mini Module, 0,9 M ...